Laacib hore oo noqday WAKIIL rasmi ah oo ka diiwaan gashan FA-ga Ingiriiska | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Laacib hore oo noqday WAKIIL rasmi ah oo ka diiwaan gashan FA-ga...
Laacib hore oo noqday WAKIIL rasmi ah oo ka diiwaan gashan FA-ga Ingiriiska
(London) 18 Juun 2020 – Laacibkii hore ee Xulka Qaranka, Ismaaciil Maxamed Cumar, ayaa loo diiwaan geliyey inuu yahay wakiil rasmi ah oo ka qayb qaadan kara kala iibinta laacibiinta kubadda cagta.
Ismaaciil Diyeeshe oo uu fadhigiisu yahay Ingiriiska iyo Talyaaniga, ayaa hadda sidaa uga mid noqday FA-ga Ingiriiska, isaga oo ka mid ah boqollaal wakiil oo cusub oo iminka la diiwaan geliyey.
Diyeeshe ayaa sidaa darteed wixii haatan ka dambeeya ka shaqayn kara horyaallada waawayn ee qaaradda Yurub sida EPL, Serie A, La Liga iwm.
Wuxuu Imaaciil sidoo kale aalaaba gacan ka gaystaa soo xulista laacibiinta Xulka Qaranka Somalia ku metela ciyaaraha caalamiga ah, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey ee wacdaraha ka dhigay Zimbabwe iyo Koobka Bariga & Bartamaha Afrika.
Previous article”Qur’aanka ayaa ka daran Karoonaha!” – Siyaasi cunsuri ah oo u gefey Muslimiinta & tillaabo sharci ah oo loogu hanjabey
Next articleYAA SHIDAYA SHUCLADII SHAHIIDKA: Ma sidaa ayuu ku baaba’ayaa dhaxalkii Ina Baashe?